पाँचौ छोरी जन्मिएपछिको गर्भमा पत्नीमाथी श्रीमानले जे गरे थाहा पाउँने सबै चकित ! – नेपाली सूर्य
पाँचौ छोरी जन्मिएपछिको गर्भमा पत्नीमाथी श्रीमानले जे गरे थाहा पाउँने सबै चकित !
September 21, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on पाँचौ छोरी जन्मिएपछिको गर्भमा पत्नीमाथी श्रीमानले जे गरे थाहा पाउँने सबै चकित !
काठमाडौं । भारत, उत्तर प्रदेशको बदायुन जिल्लामा, एक पतिले आफ्नी ग’र्भ’वती प’त्नीमाथि ह’–म’–ला’ गरेका छन् । उनी ग’र्भमा रहेको शिशु छोरा कि छोरी भनेर हेर्न चाहान्थे त्यसकारण उनले आफ्नै श्रीमतीमाथि यसरी व्यवाहार गरेका हुन् । घाइते महिलाको अवस्था गम्भीर अवस्थामा रहेको छ । उनको दिल्लीको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । प्रहरीले श्रीमानलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
बदायुनका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्माले बीबीसीलाई भने, ‘घाइते महिलाको भाईको तर्फबाट प्रहरीले प्राप्त गरेको उजुरीको आधारमा आईपीसीको धारा–३०७ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ र आरोपीलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । यद्यपि घटनाको बारेमा सबै पक्षबाट जानकारी लिइएको छ र यसै आधारमा अर्को कारवाही गरिनेछ ।’
बदायुन जिल्लाको सिभिल लाइन्स थाना क्षेत्रको नेकपुर क्षेत्रमा बस्ने पन्नालालले आफ्नी ग’र्भव’ती पत्नी अनितालाई घाँ’स का’–ट्ने’ ‘हँ–सि’–या’ले ह’–म’–ला’ गरेका हुन् । पन्नालालकी श्रीमतीको परिवारका अनुसार पन्नालाल पत्नीको कोखमा रहेको छैठौं सन्तान छोरा वा छोरी छ भनेर हेर्न चाहन्थे । पन्नालालकी श्रीमतीकी दिदी रेखाले मिडियालाई बताइन् कि पन्नालालको पाँच छोरी छन् र उनी फेरि छोरी जन्माउन चाहँदैनन् ।
रेखाले भनिन, ‘पन्नालाल यसबारे आफ्नी श्रीमतीसँग विवाद गर्थे । अनितालाई उनी ‘हा’तपा’त’ पनि गर्थे । शनिवार पनि उनलाई नराम्ररी ‘हा’त’पा’त’ गरियो र त्यसपछि हँ’–सि’–या’ले ह’–म’–ला’ गरेका हुन् ।’ अनिताका भाई राजीवका अनुसार अनीताको अवस्था गम्भीर भएकोले उनलाई बरेलीका डाक्टरको सल्लाहमा आइतबार दिल्ली लगिएको हो । राजीव पनि उनीहरूसँगै छन् । राजीवको आरोप छ कि पन्नालालले अनीताको ग’र्भमा रहेको बच्चा छोरा वा छोरी भनेर हेर्नका लागि यो सब ह’र्क’त’ गरेका हुन् ।
यद्यपि हिरासतमा रहेका पन्नालालले अनीतासँग विवाद रहेको बताउँदै उनलाई क्रो’ध’को समयमा हँ’–सि’–या’ ‘हा’ने’को तर आरोप लगाएजस्तो कुरामा सत्यता नभएको बताएका छन् । उनले आफुले गर्भमा छोरा छ कि छोरी भनेर आफुले यो सब नगरेको बताएका छन् । उनले आन्तिरक विवादका कारण यो सब भएको हो ।
पन्नालालले भने, ‘मेरा पाँच छोरीहरू छन् । मेरा एक छोरा ‘म’रि’स’के’का छन् । मलाई थाहा छ कि बच्चाहरु भगवानको उपहार हुन्, जे हुन्छ त्यो देखिने छ । मेरी श्रीमती मसँग सधैं विवाद गर्छिन् । शनिवार पनि त्यहाँ विवाद र ‘क्रो’ध थियो । मैले ‘हँ’–सि’–या’ उ’नीतिर ‘फ्याँ’कि’दि’एँ ‘। मलाई थाहा थिएन कि यसले उनलाई यत्ति धेरै ‘चो’ट’ पुर्याउनेछ ।’
त्यहि समयमा पन्नालालका छिमेकीले आफ्नो नाम न छाप्न सर्तमा अर्को कथा सुनाए । छिमेकीका अनुसार, ‘एक पण्डितले भविष्यवाणी गरेका थिए कि बदायुन जिल्लामा छैटौं छोरीको जन्म लगातार हुन्छ । यस डरले पन्नालालले आफ्नी श्रीमतीलाई ‘ग’र्भ’प’त”न’ ‘ग’रा’उन भने । उनको इन्कार गरेपछि उनी विवाद भएर घा’इते ब’नाइदिए ।’
प्रहरीका अनुसार पन्नालालका छोरीहरु र उनीहरुका परिवारका अनुसार अनीतालाई आन्तिरक विवादका कारण ह’–म–’ला गरिएको हो ।
सञ्चारमाध्यमहरुमा आएकोजस्तो घटना होईन् । एसएसपी संकल्प शर्मा भन्छन्, ‘प्रहरीले छिमेकीहरूसँग पनि कुरा गरेको छ र आरोपीको परिवारलाई पनि सोधपुछ गरिएको छ । आरोपितका छोरीहरू ठूला भए पनि उनीहरूलाई पनि सोधपुछ गरिएको छ।’ प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको भन्दै चाँडै नै सत्य प्रकट हुने बताएको छ । जनबोलीबाट
भाइरल कमला घिमिरेको गीतमा अन्जली अधिकारीको अभिनय (भिडियो)
३७ दिनको आइसोलेसन बसाइपछि कोरोनालाई जितेर घर फर्के राजेन्द्र ढुङ्गाना (पूरा पढ्नुहोस)
October 16, 2021 Nepali Surya
मोतिपुर घटना : चार दिनपछि झडपस्थलमा भेटिए दर्जनौं पेट्रोल बम
October 13, 2021 Nepali Surya